ဗဟန်းနှင့် မြောက်ဒဂုံ၌ ကေတီဗွီ ဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူ…. – သတင်းထူး – Thadin Htoo
ဗဟန်းနှင့် မြောက်ဒဂုံ၌ ကေတီဗွီ ဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူ….
By Min Khant	 Last updated Sep 5, 2020
COVID- 19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်း ကော်မတီ၏ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်အား လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သည့် KTV ဆိုင်များအား သဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေအရ အရေးယူထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။COVID- 19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသော ကာလအတွင်း ရောဂါကူးစက်မှုအား ထိန်းချုပ်တားဆီးနိုင်ရန်အလို့ငှာ COVID- 19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းကော်မတီမှ KTV/Night Club များ ဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ထားသည့်ကြားက လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေကြောင်း သတင်း အရ
စက်တင်ဘာ ၂ ရက် ည ၁၀ နာရီ မိနစ် ၅၀ တွင် ဗဟန်းမြို့နယ် သာသနာ့ရိပ်သာ ရပ်ကွက် ဆရာစံလမ်း အမှတ်(၂၄)ရှိ LAX KTV ဆိုင်သို့ လည်းကောင်း၊ ည ၁၁ နာရီခွဲ တွင် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ် (၄၅) ရပ်ကွက် ပြည်ထောင်စုလမ်း အမှတ် (၁၁၁/ ၁၁၂)ရှိ Privacy KTV ဆိုင်သို့လည်းကောင်း ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည်။ထိုသို့ စစ်ဆေးခဲ့ရာ LAX KTV ဆိုင်မှ မန်နေဂျာကျော်မျိုးထွန်း၊ ဆိုင်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး၊ အကူသီဆိုသူအမျိုးသမီး နှစ်ဦး၊ လာရောက်သီဆိုသူ အမျိုးသား တစ်ဦး စုစုပေါင်း ခြောက်ဦးအားလည်းကောင်း၊ Privacy KTV ဆိုင်မှ မန်နေဂျာ ကျော်ယု(ခ) အောင် ကျော်လင်း၊ ဆိုင်ဝန်ထမ်းများ၊ အကူသီဆိုသူအမျိုးသမီးများနှင့် လာရောက်သီဆိုသူများ
စုစုပေါင်း ၃၈ ဦးအားလည်းကောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် အဆိုပါ KTV ဆိုင်နှစ် ဆိုင်မှ ဆိုင်ပိုင်ရှင်နှစ်ဦးနှင့် မန်နေဂျာနှစ်ဦးတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းအသီးသီး၌ သဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ-၃၀(က)ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အလားတူ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ညမထွက်ရ အမိန့်အားဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူ အမျိုးသား၃၀၈ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၆ ဦး စုစုပေါင်း ၃၂၄ဦး၊ မော်တော်ယာဉ် ၇၃ စီး၊ ဆိုင်ကယ်၂၄ စီးတို့အား ပြစ်မှုဥပဒေပုဒ်မ- ၁၈၈ဖြင့် အရေးယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တောင်ဥက္ကလာပမှ ထပ်တိုးလူနာ (၁၃)ဦးတွင် (၉)ဦးမှာ OMEGA အလှပြင်ဆိုင်မှ ဝန်ထမ်းများဖြစ်…
ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ အများဆုံးသူတွေ ကာကွယ်ဆေး ဦးစားပေးဖို့ WHO တိုက်တွန်း…